Gabadhaan 1 sano ayay luuqada ku baratay oo hadda jaamacad ayay bilaabaysaa | shumis.net
Home » Layaab » Gabadhaan 1 sano ayay luuqada ku baratay oo hadda jaamacad ayay bilaabaysaa
Gabadha lagu magacaabo Farah Shkair oo 19-sano jir ah waxay iyada iyo reerkeeda ka soo carareen dagaalada ka socda Syria, Waxay Sweden soo galeen muddo 1,5 sano ka hor ah. Gabadhaan oo ku nool magaalada Helsingborg ayaa markii ay bilowday SFI waxay dareentay in aysan si degdeg ah luuqada uga baran karin halkaasi, iyadoo durbadiiba ka codsatay macalimiinta loo gudbiyo Komvux.
Halkaasi ayay ka bilowday dhowr koorso oo luuqada ah iyo koorsooyinka kale ee dugsiga sare, iyadoo intaasi isku diyaarinaysay in ay jaamacad ka gasho Sweden. Telefishinka SVT ayay u sheegtay in ay si xoog leh isugu deyday in ay barato luuqada, iyadoo maalin walba akhrisan jidhay wararka iyo daawashada barnaamijyada caruurta.
Ardada kale ayaa Farah u sheegay in ay muddo dheer ku qaadan doonto in ay jaamacad ka gasho Sweden, qaasatan barnaamijka dhaqtarka ilkaha oo ay doonaysay balse hadalkooda ayay dhagaha ka furaysatay. Sanadkaan ayaa gabadhaan waxay iskuulkeeda ka gashay kaalinta 1-aad, iyadoo hadda loo ogolaaday in ay Dhaqtarka ilkaha ka barato jaamacada Malmö Högskolan taasi oo guud ahaan qaadatay 74 arday oo baranaya maadadaan.
Title: Gabadhaan 1 sano ayay luuqada ku baratay oo hadda jaamacad ayay bilaabaysaa